Vokatra ity dia noforonina mampiasa ny iray-dingana, solvent-fomba maimaim-poana, ka dia nomena ho toy ny rano na fampiatoana na lyophilized vovoka, izay azo mora levona indray amin'ny rano alohan'ny fampiasana.
Zavatra Name: Landy fibroin nanoparticles / microparticles
Landy fibroin proteinina-monina sy ny micro- nanospheres manome safidy vaovao ho an'ny fanaterana zava-mahadomelina sy ny fampiharana hafa noho ny biocompatibility, biodegradability sy ny zava-mahadomelina tunable Loading sy hamoaka fananana, indrindra fa proteinina / peptide zava-mahadomelina sy ny rano-Mora mampivaingana ny zava-mahadomelina. Ny fahaiza-miasa mahomby encapsulation avo sy ny zava-mahadomelina controllable famoahana kinetics dia afaka ho tratra amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny manjelanjelatra.Mangatsakatsaka beta-taratasy afa-po amin'ny fitaovana amparasily.
Ny format manan-tompo landy Nano / microspheres dia noforonina mampiasa ny iray-dingana, solvent-fomba maimaim-poana, ka dia nanome toy ny fampiatoana na ny rano na ny vovoka lyophilized, izay azo mora levona indray amin'ny rano alohan'ny fampiasana.
Fikirana sy ny fananana
Size ny nanosphere: azo samihafa ao amin'ny isan-karazany ny 100-1000 nanometers;
Size ny microsphere: azo samihafa ao amin'ny isan-karazany 1-100 micrometers
Figure 1 EM ny landy fibroin nanosphere (500 nm) isa 2 EM ny landy fibroin microsphere (2-3 μm)
Ity vokatra dia vokatra namboarina. Afaka manolotra maromaro nanospheres na microspheres amin'ny zava-mahadomelina sy tsy misy Loading araka ny fangatahana.
Next: Tsy hita maso sy Peelable Silk Fibroin Film
Silk Fibroin proteinina Microparticles
Silk Fibroin proteinina Microspheres
Silk Fibroin proteinina Nanoparticles
Silk Fibroin proteinina Nanospheres
Silk proteinina Microparticles
Silk proteinina Microspheres
Silk proteinina Nanoparticles
Silk proteinina Nanospheres